Riyad Mahrez oo noqday Laacibka 2-aad ee Afrika ugu Qaalisan, Safka 10-ka Laacib ee Qaaraddan ugu Qaalisan Halkan ka baro
Monday, February 18th, 2019 - 20:17:35
Thursday July 12, 2018 - 11:51:31 in Wararka by Muuse Cabdi
Riyad Mahrez ayaa ka mid noqday xiddigaha Taariikhda ugu qaalisan ee la kala iibsado kuwaas oo kasoo Jeeda Qaaraddaan Afrika, keddib markii Toddobaadkan lagu dhawaaqay in uu ka tegay Leicester City kuna biiray Manchester City.
Laacibka dalka Algeria, ayaa horyaalka la qaaday kooxda Foxes Sanadkii 2016-kii, wuxuuna ku wareegay £60 milyan oo Gani, waxaana jira xiddigo badan oo Afrikaan ah oo lacag badan ku fadhiya.
Halkan waxaan idinkugu soo Gudbin doonnaa 10-ka Laacib ee ugu Qaalisan?
10. Emmanuel Adebayor (Arsenal > Manchester City) - £25 million
Laacibka dalka Togo ayaa ahaa laacibkii ugu qaalisanaa ee Afrikaan ah ee la iibsado markii uu Manchester City kula biiray £25 milyan Sanadkii 2009.
9. Wilfried Bony (Swansea City > Manchester City) - £28 million
Laacibka dalka Ivory Coast ayaa heystay laacibka ugu qaalisan ee Afrika 18 bilood, markii uu ka dhaqaaqay Swansea City kuna biiray Manchester City Sanadkii 2015, in kastoo u dhaqaaqistiisii Etihad Stadium ay fashilisay hannaankiisii ciyaaraha.
8. Islam Slimani (Sporting Lisbon > Leicester City) - £29.5 million iyo gunno
Leicester ayaa diiwaanka ku dhigatay 2016 Saxiix ku kacaya 30 milyan oo Yuuro oo lasii raacinayo 5-milyan oo Gunno ah si ay usoo qaatay Algeria wiilkeeda oo ka yimid Sporting Lisbon.
7. Eric Bailly (Villarreal > Manchester United) - £30 million
Jose Mourinho ayaa lacag waalli ah u huray Cote d'Ivoire difaacooda Eric Bailly si uu xal uga gaaro Liidashada difaaca Manchester United 2-sano ka hor, kaasoo £30 milyan lagu qaatay isagoo 22-jir ah.
6. Sadio Mane (Southampton > Liverpool) - £35 million
Laacibka dalka Senegal ayaa noqday Afrikaankii ugu qaalisanaa Kubadda Cagta markii uu ka yimid St Mary kuna wareegay Anfield bishii June 2016, kaas waxaa lagu qaatay £35 milyan.
5. Mohamed Salah (AS Roma > Liverpool) - £36.9 million
Kooxda Reds ayaa jebisay Rikoodhkii ay sameysay 12 bilood ka hor markii ay lasoo saxiixatay Salah oo ka yimid Roma qiimo dhan £36.9 milyan ayaa lagu soo qaatay, in kastoo wadarta marka lagu daro Gunnada ay bixisay kooxdiisu £43.9 milyan.
4. Naby Keita (RasenBallsport Leipzig > Liverpool) - £52.75 million
Liverpool ayaa mar kale diiwaanka soo gelisay laacib kale oo qaali ah, laacibka dalka Guinea ee Keita kaasoo noqonaya laacib kale oo Afrikaan ah qaalina ah eek u biiray Merseyside, balse Reds taageerayaasheeda ayaa ka filaya Laacibka Galbeedka Afrika in uu soo bandhigi doono wax ka badan qiimaha uu ku fadhiyo.
3. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund > Arsenal) - £56 million
Iyadoo ay si weyn u dooneysay Real Madrid ama xataa laga raadinayay horyaalka Chinese Super League, Auba ayaa ugu dambeyn ku biiray Arsenal markii uu ka dhaqaaqay Borussia Dortmund, oo ka dhisan horyaalka Bundesliga markii uu gooldhalinta Horyaalkaas qaaday, isagoo dhaliyay 31 gool xagaagii 2016-17, ka hor inta uusan dhalin 13 gool 16 kulan oo uu ciyaaray inta uusan ka tegin kooxdaas Sanadkii xigay.
2. Riyad Mahrez (Leicester City > Manchester City) - £60 million
Keddib suuqa kala iibsiga oo ay Labadii Sano ee dambe ugu jirtay Mahrez waxay soo qaadatay laacibkii Leicester iyo Algeria kooxda Man City, waxaana aad u jeclaa ciyaartiisa Pep Guardiola oo ku sigtay laacibkan qaadashadiisa Bishii January.
1. Cedric Bakambu (Villarreal > Beijing Guoan) - £65 million
Laacibka Bakambu ayaa ah laacibka uguq aalisan Waqtigaan ee la iibsaday dhammaan Xiddigaha Qaaradda Afrika Beijing Guoan ayuuna kula biiray lacag dhan £65 milyan isagoo ka dhaqaaqay Villarreal.